Depiote Helson Bresson : “Betsaka ny zava-bitan’ny Filoha tao Toliara II” -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Helson Bresson : “Betsaka ny zava-bitan’ny Filoha tao Toliara II”
04/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mbola tsy nisy Filoham-pirenena nahavita fotodrafitrasa betsaka mihoatra ity filoha Hery Rajaonarimampianina ity , tao amin’ny distrikan’i Toliara II misy anay, hoy ny depiote Helson Bresson, raha nanao tomban’ezaka ny zava-bita tamin’iny taona 2017 iny ny tenany.
“ Hatramin’ny taona 1960 nahazoantsika fahaleovantena, dia mbola tsy nahita Filoha nahavita zavatra betsaka toa ity mitondra antsika ity izahay. Noho izany dia velombolo izahay fa mba mahazo ny anjara masoandronay amin’ny asa fampandrosoana”, hoy ny fanazavany.
Betsaka ny zava-bitan’ny Fitondram-panjakana tamin’iny taona 2017. Isan’izany ny fahavitan’ny lalana Toliara – Morombe izay tena manala fahasahiranana ny vahoaka tokoa. Fiaraha-miasa tamin’ny Bad moa izy io, kanefa raha tsy teo ny fitondram-panjakana niara-nisalahy tamin’izany dia zava-poana izany.
Zava-dehibe koa ny fahavitan’ny tetezana Befandriana sy Morombe izay mirefy 200 metatra. Vao tsy ela akory izay no nahazoan’ny tananan’i Saint Augustin- Mahaboboka nahazoana ny angovo azo havaozina, izay notokanan’ny Filoham-pirenena.
“ Zava-dehibe ho anay ny fampandrosoana nentin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tao amin’ny distrikan’i Toliara II. Hafa tokoa rehefa tonga ny jiro manazava ny tanàna toy ny ao Saint Augustin. Mazava ny sain’ny olona, ary mazava ihany koa ny lalan’ny fampandrosoana hapetraka. Mitombo ny mpizahatany. Iny faritra misy anay iny dia isan’ny toerana be mpizaha tany. Tamin’iny taona 2017 iny dia nahatratra hatramin’ny 700 000 ny isan’ny mpizaha tany tonga tany amin’iny tapany atsimon’ny nosy iny”, raha ny fanazavan’ny depiote Helson Bresson hatrany.
Fa isan’ny fanantenana lehibe ho an’ny tapan’ny atsimon’ny Nosy ihany koa ny ho fahavitan’ny toho-dranon’i Mangoky . Efa nanomboka efa ho herintaona izay ny asa, ary mbola mitohy izany mandrake ankehitriny. “ Ho sompitr’i Madagasikara amin’ny fambolem-bary ny ao Atsimo raha vita soa aman-tsara io toho-dranon’i Mangoky io. Efa nambaran’ny Filoha ombieny ombieny fa hiainga any Atsimon’ i Madagasikara ny fampandrosoana an’i Madagasikara”, hoy hatrany ny fanazavany.
Mahery vaika ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo natrehina hatramin’izay ary mbola ady lehibe no miandry an’i Madagasikara mba handresena ity aretina mikiky mangina ny firenena ity. Mikiky mangina misy fiantraikany lehibe eo amin’ny tanjaka ara-toekaren’ny ...Tohiny